Clutch Disc Vagadziri - China Clutch Disc Vatengesi & Fekitori
Sinotruk HOWO Rori Kutakura Zvikamu AZ9725160390 Clutch Disc
Nzvimbo Yekutanga: Hebei, China Technology: Kupisa kunopisa, Kudzima uye Kutapira Kusvika kuInternational Standard
Hwakavimbika hunhu Chikamu chese chinobatirira chinofanira kuyedzwa chisati chatumirwa
430mm 1862519240 matatu-danho kuvhunduka kunotora unopisa ndiro yepamusoro rori batira disc
Iyi mhando ye430mm 1862519240 matatu-danho kuvhunduka kupinza unopisa ndiro yepamusoro mhando batira disc.Made muHebei, China, OEM, 100% yakaedzwa isati yasvitswa, inoshanda kune eEuropean, maJapan, maAmerican, marori eGerman nemabhazi kana mamwe marori.
Clutch ndiro yetraki inorema, 7 chitubu chevhavha, zvedongo ndiro clutch ndiro, China clutch ndiro fekitori, Hebei, China, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro.
Yakakwira mhando fekitori rinorema basa rori zvikamu clutch disc 1862215032 matori matori
Hukuru i430 * 240 * 10n * 50.8..High nemazvo, pasi ruzha; Rutsigiro rwakareruka. Rwakawanda rwakanaka mhando clutch zvikamu zvemamodeli akasiyanasiyana anonyorera emhando dzemotokari kumusika wepasi rose;
430mm mhangura yakavakirwa bhagi dhisiki dhizaina yechiJapan clutch kit
430mm Hino batira disc, mutengo wakakodzera uye mhando yepamusoro chigadzirwa. Tinogona kupa iri nani sevhisi.Tine batira zvikamu zvinogona kushandiswa kune Rori, Bhazi, Mota, Forklift, Tarakita
ZveChinese Rori, YeJapan Mota, American Mota, European Mota, nezvimwe
Hunhu Hwako hunogona kufananidzwa nezvigadzirwa mumusika weEuropean, American Middle-kumabvazuva nzvimbo, Australia, Southeast nharaunda, nezvimwe.
truck clutch disc oem ​​1862215032 and other size truck clutch disc
Tinogona kusangana akasiyana ehutano chikamu chikumbiro kumusika wakasiyana. Wide renji yakanaka yemhando yekubatira zvikamu zvemhando dzakasiyana anonyorera iwo emota mota kumusika wepasi rose;
Yakakwira mhando Chinese bhazi zvikamu clutch1878063231 ndiro / clutch disc yekutengesa
Chikamu chega chega chekubatira chinofanira kuyedzwa chisati chatumirwa.
Kukura kweye clutch ndiro yeiyo 31250-5241 rori iri 350 * 220 * 10, uye inotangira ku clutch fekitori muHebei, China, isina kwaakaregedza kurongedza kana yakasarudzika brand brand bhokisi kurongedza. Inonyanya kutumirwa kuEurope neUnited States, Asia uye musika weMiddle East, ine mhando yepamusoro uye kuita kwakanaka.
Kune America Heavy Duty Rori
108925-82 (15-1 / 2 "x 2") Yakakwira Performance Chinyorwa-Rongedza Clutch kit YeAmerican Heavy Duty Rori,
T5189-14302 tarakita batira disc yeKioti DK65, DK75, DK90
Zvekurima mamodheru ane 325mm batira ndiro yese kerameti
Model 325mm, ese mhangura substrate batira ndiro, yakavimbika mhando uye inodhura, China batira ndiro fekitori, mhando sevhisi, kutarisira kushanda newe